Laanta cusub ee Warshad Gaoyi ayaa la bilaabay!
1. Qodista dhagaxa cusub ee la soo iibsaday, iyadoo la raacayo cabirka ilaalinta baakooyinka, waxaa gudaha ku jiri doona dufan ka-hor-taga. Hubso inaad kala firidhiso oo aad ka saarto ka hor intaadan isticmaalin, oo saliid ku mari dhammaan qaybaha dhaqaaqa markaad dib u cusbooneysiinayso. Kahor intaan shaqada la dirin sm ...
Warshaddeenna cusub ee ku taal Gao yi Hi aag teknoloji, 3 jeer ka weyn warshadii hore, 2 khadad wax soo saar oo ka badan warshaddii hore, oo leh qalab cusub iyo qalab aan ku qancin karno baahiyaha macaamiisha badan. Qaadashada waa nooc ka mid ah aaladda sambabaha ee loo yaqaan 'pneumatic tool' kaas oo si ballaaran loogu adeegsado macdanta ind ...
Drum waxaa sanad walba lagu cayaaraa furitaanka warshadda ka dib ciidaha ciidda gu'ga waxayna durba noqotay shir ka dhacay Qihong, waxay muujineysaa wada shaqeyn wanaagsan oo ka dhexeysa xubnaha qihong. Hawshu waxay asal ahaan timid markii warshadu ay bilaabato, wakhtigaas waxaan ku jirnaa trou ...